Cecconoid CC: Chikoro Chekare Chakafuridzirwa 8-bit Vhidhiyo Game | Linux Vakapindwa muropa
Cecconoid CC: chikoro chekare 8-bit yakafuridzirwa mutambo wevhidhiyo
Kana iwe uchida yemhando yepamusoro uye retro mitambo yemavhidhiyo, kunyanya iyo yakavakirwa pa8-bit, une chokwadi chekuchida. cecconoid. Uye kwete, harisi zita kubva kune zvakapfuura, asi mutambo wevhidhiyo wakafemerwa neyakare, asi yazvino kwazvo, sezvo yakaunzwa mu2019.Zvechokwadi, ndeye mahara kune yako GNU / Linux distro, uye iwe inogona kuiisa zviri nyore kuve pakati pemazororo uye zvitoro zveappuro mune yayo isina DRM vhezheni.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveCecconoid, iri kupfura vhidhiyo mutambo nechinhu chekare, asi izvo hazvibvise chero chinhu chekukwirisa. Iyo yakavakirwa pane nyaya inotanga musi waApril 15, 2088, umo ngarava yeEquinox iri kurwiswa naStormlord nema robotic minions ake, maExodo. Ndimi mega tariro yevashandi, saka munofanirwa kuponesa ngarava nekukunda akateedzana ezvikwiriso uye kuhwina muhondo yekurwisa vavengi vako. Kuti uite izvi, unofanirwa kutyaira Samurai-1 murwi, uchitsvaga kiyi yaCaptain Solomon, uchibvisa mabutiro emarobhoti akaipa uye nekuponesa Equinox kubva mukuparadzwa.
Cecconoid yakafuridzirwa neavo 8-bit, sezvandambotaura, uye yakanyanya kugadzirirwa kubata nemajoice uye inokamurwa kuita zviyero. Chikamu chichava chimwe chinomiririra apo mapikisheni ndiwo ma protagonists uye nhanho dzichiri nhema uye chena.
Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kuziva zvinhu zviviri. Kune rimwe divi, vagadziri varo vanopa zano kana iwe uine matambudziko ekufa pfari, nekuti, kunyangwe iri nhema uye chena, inoshandisa yakawanda yemwenje mhedzisiro. Kana iro risiri dambudziko uye ukashinga kutamba mutambo, unogona kuona rumwe ruzivo nezve iro rekubhadhara zita pane yavo chitoro saiti chiutsi kana kushanyira iyo peji ye GitHub, kwaunowana kodhi yayo yekodhi yeiyo DRM-yemahara uye yemahara vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Cecconoid CC: chikoro chekare 8-bit yakafuridzirwa mutambo wevhidhiyo
cpufetch, nzira inoshanduka-shanduka yekuona ruzivo nezve CPU yako kubva kuchiteshi
Kumirira Shazam.com, Mousai anozivisa zvauri kuteerera neAudD API